Pharyngomycosis (လည်ချောင်းမှိုစွဲရောင် ရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Pharyngomycosis (လည်ချောင်းမှိုစွဲရောင် ရောဂါ)
Pharyngomycosis (လည်ချောင်းမှိုစွဲရောင် ရောဂါ) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr . Phyu Mon Latt ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
Pharyngomycosis (tonsillomycosis, fungal infection of the mouth, fungal pharyngitis, fungal tonsillitis, fungal infection of the throat, thrush) လည်ချောင်းမှိုစွဲရောင်ရောဂါ ဟာ မှိုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Pharyngitis ဟာ oropharynx ရဲ့ mucosa ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အာသီးရောင်ခြင်းကတော့ အာသီးတွေမှာ lymphoid formation ဖြစ်ပြီး အာသီးရောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေ အတော်များများမှာ ဒီရောဂါဟာ yeast-type မှိုကြောင့် ဖြစ်ပြီး mold type ဖြစ်တာရှားပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးတွေ၊ cortecosteroids၊ cytotoxic drugs၊ ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေနဲ့ လည်ချောင်းရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဆီးချို၊ တီဘီ၊ ဗီတာမင် ချို့ယွင်းခြင်းတွေဟာ ဒီရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Pharyngomycosis ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
Pharyngomycosis ဟာ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Pharyngomycosis ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Pharyngomycosis ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
လည်ချောင်း ယားခြင်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
နာကျင်မှုဟာ အလယ်အလတ်ဖြစ်ပြီး ဝါးရင်၊အစာစားရင်ပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။ လူနာတွေဟာ မေးရိုးနေရာတွေနဲ့ လည်ပင်းအရှေ့ပိုင်း၊ နားရွက်တွေကို ပြန့်လာတဲ့ နာကျင်မှုကို ခံစားကြရပါတယ်။
Pharyngomycosis ရဲ့ အဓိကလက္ခဏာကတော့ အကွက်တွေ ထခြင်း၊ mucosa ရောင်ခြင်းနဲ့ အဆိပ်တက်ခြင်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pharyngomycosis ဟာ မကြာခဏ (တစ်နှစ်မှာ ၂-၁၀ကြိမ် အထိ) ဖြစ်တတ်ပြီး အသက်အရွယ်မျိုးစုံမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Pharyngomycosis ဟာ ရုတ်တရက် (သို့) နာတာရှည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အာသီး၊ palatal handles တွေနဲ့ အာခေါင်နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူနာတွေမှာ အောက်ပါလက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကုတ်ခြင်း၊ ပူခြင်း၊ လည်ချောင်း မသက်မသာဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ငွေ့ငွေ့ဖျားခြင်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pharyngomycosis ရှိခြင်းဟာ မှိုရောဂါကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အဖြူရောင် အကွက်ထခြင်းဖြစ်ပြီး လွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သွေးထွက်တဲ့ အနာတွေကို တခါတလေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Pharyngomycosis ဟာ မှိုကြောင့် ဖြစ်ပြီး အကွက်တွေဟာ အဝါရောင်ရှိကာ ဖယ်ရခက်နေရင်တော့ ဒါဟာ ဆုံဆို့နာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မှိုရောဂါ larynx, esophagus ကို ပြန့်သွားပြီး peritonsillar abscesses တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါကိုစောစီးစွာ သိရှိပြီး ကုသခြင်းဟာ ရောဂါပိုဆိုးလာခြင်းနဲ့ အခြားအရေးပေါ် အခြေအနေဖြစ်ခြင်းတွေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေကို ကာကွယ်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ စကားပြောသင့်ပါတယ်။
ဘာတွေက Pharyngomycosis ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
စစ်တမ်းတွေအရ Candida အမျိုးအစားဟာ မှိုရောဂါ ၄၃% ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်ပြီး ဖြစ်စေတဲ့ အကောင်တွေကတော့ C. albicans, C. tropicalis, C.krusei, C. glabrata, C. parapsillosis, S. stellatoidea, C. intermedia, S. brumpti, C. sake, and others. S. albicans (၅၀%) ဖြစ်တာ အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီး S. stellatoidea ကတော့ ဒုတိယ အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားဟာ ရုပ်သွင်အရ၊ ဓါတုဇီဝ ဂုဏ်သတ္တိတွေအရ C. albicanse နဲ့ တူတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက Pharyngomycosis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Pharyngomycosis ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက် ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ အဖြစ်များပြီး အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာ အဖြစ်နည်းပါတယ်။
ရောဂါပိုးတွေနဲ့ မကြာခဏ ထိတွေ့မိခြင်း
ကျောင်းတက်အရွယ်ကလေးငယ်တွေဟာ ရွယ်တူကလေးတွေဆီကရောဂါကူးပြီး Pharyngomycosis ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ယေဘူယျအသိပေးချက် – ယခုဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များမှာ ဆေးပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ၏ အကြံပေးချက်များနေရာတွင် အစားထိုးရန် မသင့်တော်ပါ။ ဆက်လက်သိရှိလိုသောအချက်အလက်များအတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲံ အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Pharyngomycosis ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
တကယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က ဒီရောဂါရှိတယ်လို့ သံသယရှိတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခန္ဓာစစ်ဆေးခြင်းကို ပြုလုပ်ပြီး အခြားစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါစဖြစ်ချိန်၊ ထူးခြားမှုတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူနာတွေမှာ အရင်က အာသီးပတ်လည် ရောင်ဖူးခြင်း၊ အနာဖြစ်ဖူးခြင်း ရှိမရှိ၊ အာသီးရောင်ခြင်းရဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်၊ ကြာချိန်နဲ့ ပုံစံ တွေကို သိသင့်ပါတယ်။
အရင်က ကုသမှုနဲ့ အစွမ်းထက်မှုတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ လူနာမှာ ပိုးသတ်ဆေး၊ cortecosteroids, cytotoxic drugs တွေ သောက်နေမှု ရှိမရှိ၊ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ နေပုံထိုင်ပုံတွေရဲ့ ထူးခြားမှု၊ အရင်က ဖြစ်ဖူးတဲ့ရောဂါနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေကိုလည်း မေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Pharyngomycosis မကြာခဏဖြစ်တဲ့ လူနာတွေမှာ ပုံမှန်ကုသမှုတွေဟာ ထိရောက်လေ့မရှိပါဘူး။
Pharyngomycosis ရောဂါအတည်ပြုခြင်းကို မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ အကွက်တွေ စစ်ဆေးမှု အဖြေပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အခြားရောဂါတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆုံဆို့နာ၊ ကာလသားရောဂါ၊ တီဘီ၊ အကျိတ်တွေနဲ့ အခြားမှိုရောဂါတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်စား ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
Pharyngomycosis ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
Pharyngomycosis ကုသမှုမှာ nystan ဆေးတွေကို ဝါးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစွမ်းထက်မှုမရှိရင် levorinum, dequalinium chloride တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်တဲ့နေရာကို % gentian violet, 10% solution of sodium tetraborate in glycerol and Lugol iodine solution တွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ပုံမှန်အသုံးပြုနေကျဖြစ်တဲ့ fluconazole က အသုံးမဝင်ဘူးဆိုရင် တစ်နေ့ကို Itraconazole 100mg (သို့) Ketokonazole 200mg ကို တစ်လ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Itraconazole ဟာ Candida မှိုကိုသာမက Mold မှိုကိုလည်း သတ်နိုင်ပါတယ်
အခြားဆေးမတိုးတဲ့ Pharyngomycosis အတွက် amphotericin B ကို တစ်နေ့ 0.3 mg/kg ထိုးနိုင်ပါတယ်။ Pharyngomycosis ကို amphotericin B နဲ့ ketoconazole တို့ အသုံးပြုပြီး ကုသခြင်းရှိရင် အသည်း၊ ကျောက်ကပ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို တိုင်းတာသင့်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Pharyngomycosis ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Pharyngomycosis ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အိမ်သာ သုံးပြီး၊ အစာမစားခင်တို့မှာ လက်သေချာ မကြာခဏ ဆေးသင့်ပါတယ်။
အစားအသောက်၊ ရေဖန်ခွက်၊ ရေဘူး၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ဝေမျှခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
Pharyngomycosis. https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=85&contentid=P01320 . Accessed January 3, 2017.
Pharyngomycosis . http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tonsillitis/basics/prevention/con-20023538 . Accessed January 3, 2017.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတျ 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စကျတငျဘာ 5, 2017
ချောင်းဆိုးနေတာကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝဖျော်ရည်တစ်ခု
အစားစားရင်း အသက်ရှူရခက်တဲ့အခါ ဒါတွေလုပ်ပါ။ ။
အစားတစ်လုတ်ကြောင့် ဘေဘီလေးတို့ ဒုက္ခမရောက်စေဖို့